Inkastoo Ciyaar waa boosteejo ah oo dhamaystiran oo adag, waxaa had iyo jeer waa qol Customization, taas oo si cad oo qaboow ah iyadana in aad tahay Misbaax u Adobe si ay isu soo saaraan. Inkastoo liiska qof walba uu noqon doono kala duwan waxay ku xiran tahay waxa ay u isticmaalaan Ciyaar loogu talagalay, waxaa jooga Doorashada qalabka iyo saamaynta aan ka heli ugu waxtar leh.
1. Ka dib Raadka
Qaar waxay yidhaahdaan laga yaabaa in tani waxaa la khiyaameeyay, lakiin aniga ahaan tanuna waa tiradii mid dar-ku u jilitaankii yahay. Waxaa jira sabab arrintaas, iyo in ay tahay in dib Dhibaatooyinka gelineya inaad si ay u abuuraan wax kasta oo aad ku riyoon karaan doonayo gudahood deegaanka jilitaankii. Graphics, kala guurka, horyaal iyo arrimo, darka iyo toban kun ah fursadaha kale ee lagu abuuri karo oo laga keeno si toos ah jilitaankii, oo qayb ka ah Suite la mid ah ay si fiican u dhexgalaan iyo awood kala guurka siman inta u dhaxaysa mashruuca jilitaankii ah, abuurista saamayn ama graphic in dib markii Raadka , oo hirgelinta mashruuca jilitaankii gudahood. Waxaa jira plugins kale muuqda in liiskan in tahay mid aad u awood u xaalad gaar ah, laakiin waxaa jira ma jiro, la ballaadhkiisuna wuxuu ahaa awooda in dib Dhibaatooyinka keenaa miiska.
2. Video nidaamsan
Video nidaamsan yahay plugin weyn jilitaankii, ka duwan ka dib Saameynta ay leedahay shaqada hal, iyo in uu yahay dhimista buuqa. Waa arrin aad u wanaagsan at.
Inkastoo technology Camera ayaa hormartay heerka cajiib ah, waxaa weli jira xaalado marka xataa kaamirooyin ugu wanaagsan ee la heli karo noo soo saaro video in ay tahay wax yar oo aad u buuq badan loo isticmaalo loogu talagalay, iyo in ay tahay meeshii nidaamsan Video tallaabo ee. Waxaa ka shaqeeya sidii filter video ah ka gudahood deegaanka Ciyaar iyo lagu saleyn karaa isku xigxiga ee guud ahaanteed ee tirada mid kasta oo clips oo gaar ah oo isku xigxiga oo ay sida la doonayo.
In kasta oo loogu talagalay in lagu hoos buuq u kamaradaha digital casriga ah, nidaamsan Video sidoo kale aad u faa'iido badan ee habka digitization ee VHS ka weyn ama stock filimka, oo waxaa loo isticmaali karaa si loogu nadiifiyo ilaa keentay file digital.
3. Final Raadka
Sanduuqa A utility of saamaynta iyo kala guurka, haddii ay jiri lahayd mid ka mid ah, Final Raadka habsami leh isku la jilitaankii oo ka mid ah in ka badan 120 alaabta kala duwan, haddii aad rabto in la ballaariyo maktabadda saamaynta laakiin ma laha wax baahi gaar ah, markaa taasi waa sheyga aad u. Waxaan si gaar ah sida saamaynta gargaarka 3D, laakiin waxaa jira wax in halkan nooc kasta oo mashruuc aad ka xusuusan karto.
4. muuqataa rasaas Magic
Tani waa plugin ah yaabka badnaa oo ugu horayn waa midab ku dhameysteen qalab, laakiin waxaa ka mid ah huuri ka mid ah in loo sameeyo waxa kale oo badan oo waxtar leh fursadaha. Dhameystir midabka waxaa fasalka ugu horeeya, ku timaadda in ka badan 100 presets ka mid abaabulay category si aad si deg deg ah ka heli kartaa mid ka saxda ah ee mashruuca, oo lagu daray awood u leh inay hufay iyo badbaadin natiijada sida presets caadadii taasoo la micno ah fursadaha jira aan dhamaadka lahayn si aad u hesho ka xaq u midaysan fiirin aad rabto ee aad mashruuca. In doorasho Intaa waxaa dheer u gashto dhalanrog iyo iftiiminta labada kaabidda ama looks stylized awood laga hirgeliyo si amaan doorashooyinka midabka sameeyey.
Kanu waa arrin plugin gaar ah in aan noqon doono qof walba, laakiin haddii aad tahay horurimarineed joogto ah darajo sare mar ama footage mooshin gaabis ah, tani waa plugin ah in uu noqon doono saaxiibkaa ugu wanaagsan ee nolosha. Mid ka mid ah arrimaha la walaacsan yahay exposures beddelo inta lagu jiro filim oo kale in ay soo saaraan saameynta eller markii u arkaan. Waa maxay flicker free falaa waa in ay caadi gaadhista iyo saarto flicker ah. Ma aha oo kaliya ka shaqeeya oo walaacsan, laakiin xallin karo arrimaha la midka ah la filim mooshin gaabis ah, iyo xataa caawiyo saameynta rogid aad ka heli kartid LED kormeerayaasha nalalka iyo computer. Waxaa ka shaqeeya gudaha ka Ciyaar iyo yimaado la presets waxtar leh si hannaanka looga dhigo mid fudud sida ay suurtagal tahay, inkastoo ay dhammaan shaqsi ahaan la fulineed karaa meesha loo baahan yahay in la helo natiijada kaamil ah.
Plugin kale oo weyn in uu yahay mid aad u gaarka ah in ay la isticmaalo, Burburka waa, inkastoo magaca, plugin ah nondestructive filter in simulates hadhuudhka, kala carar, khadadka scan iyo goobtii idinkoo ah film jir ah. Waxaa jira in ka badan 80 presets heli karaa si ay u isticmaalaan sida uu yahay ama dhibic saldhig u ah tijaabo gaar ah, iyo halka ay la isticmaalo ma in ay si weyn u baahsan, waayo, saamaynta ay da'doodu u soo saara ma jiraan waa si fiican.
Tani waa plugin fiican u ogolaanaya abuurka, aad u qiyaasay, Rays. Taasi waa rays fudud dahay inaan ahaado saxda ah. Hawada, qurux badan, waxay noqon karaan waxyaabo badan, laakiin ma jiraan wax su'aalo wax ku oolnimada plugin this ee simulating rays light. Waxaa aad u fiican, maadaama ay tani xayaysiis image muujinaysaa.
Kale 'sanduuq oo tricks' alaabta style, Coremelt ka mid ah tiro aad u weyn, in ka badan 220 oo dhab ahaantii, oo ah saamaynta iyo kala guurka, oo dhan ee tayada layaab leh oo daboolaya kala duwan oo loo isticmaalo.
Waa ballaadhkiisuna wuxuu ahaa sheer ah fursadaha gudahood baakadka in kani ka mid waajib ah wixii aamadani video editor.
Tani waa xirmo xirfadle fasalka ka mid ah saamaynta iyo kala guurka in kicisaa bar ah waxa suurtagal ah, rays iftiin, quruxdeeda, iyo gaabiyo kala guurka, sida diirada iftiinka iyo rinjiga 'saamaynta si ay u fiirin video sida badan, waxaana laga yaabaa in aan mid ka mid jecel tilt- ah wareeg in ay soo saartaa toy in sida muuqaalka in uu noqday sanadihii ugu dambeeyey oo caan ah gudahood adduunka sawir ah. Guud ahaan waxaa jira in ka badan 600 oo saamayn gudahood xirmo Vitascene ah, ma aha jaban waxaa si kasta ha ahaatee, laakiin waxaa loogu talagalay squarely ee wax soo saarka xirfadeed iyo waxa uu leeyahay tayada ay ku samayn karaan.
Ugu dambeyntii waa safayr, Suite ah oo ka kooban in ka badan 250 saamaynta, presets in ay soo saaraan hal abuur iyo indhuhu kala guurka iyo saamaynta in aad shaqada.
Laga soo bilaabo glows iftiinka iyo ifa gashto si qosol leh u fiiriyaan filimka iyo laba boqol oo kuwa kale waxaa hubaal waa wax waxaa qof walba.
> Resource > Video > Top 10 Adobe jilitaankii plugins u Raadka kala duwan oo guur